Sunday Jun 02, 2019 - 05:07 PM
उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीको चुनाव नजिकिएसँगै चुनावी माहोल बढेको छ । आउदो असार १४ गते चुनावी मिति तोकिए सगै इटहरीमा चुनावी माहोल बढेको हो। आफ्नो पक्षमा अत्याधिक मत ल्याई विजयी हुन उम्मेदवारहरु लागेका देखिन्छन् । हालका वरिष्ठ उपाधक्ष्य तथा अध्यक्षका बलिया दाबेदार शैलेश क’मार विष्ट पक्षकी महिला उम्मेद्धवार सदस्यमा इटहरीकी चर्चित व्यवसायी तथा महिला समाजसेवी रञ्जु सिग्देल पनि उठेकी छिन् । उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरीमा तपाईँको उमेद्वारी किन ? जित्नु भयो भने के गर्नुहुन्छ ? लगायतको विषयमा सोच खबरका नव-सञ्चारकर्मी नबिन दाहालसँग उहाँले गर्नुभएको कुराकानी यस प्रकार प्रस्तुत गरिन्छ ः
तपाईंको पेशा व्यावसाय कस्तो चल्दैछ ?
हाम्रो पेशा व्यवसाय राम्रो चलिरहेको छ सानो लगानीबाट सुरु गरेको व्यवसाय बिस्तारै फस्टाउँदै गइरहेको छ तसर्थ हामी खुसी छौं ।
व्यवसायीको रुपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ , तपाईको व्यवसायमा कसरी आवद्ध हुनुभयो ? अनि व्यवसायमा आवद्ध हुनु भएको कति भयो ? पृष्ठभूमि बताइदिनुहोस् न ?
मेरा पुर्खा हरु कोहि पनि व्यवसायमा संलग्न हुनुहुदैनथ्यो । माइती तथा घर दुवैतर्फबाट व्यापार व्यवसाय सुरु गर्ने हामी दम्पती नै हौ । ब्यापार ब्यावसायमा लाग्नुभन्दा पहिला म चामुण्डा कलेजमा पठाउने काम गर्दथे,पछि बिहानभरि कलेज पढाउने अनि दिनभरी व्यवसाय गर्ने गर्न थाले। पछि मैले आफैं मालिक आफै नोकर बन्ने चाहनाले पढाउने काम छोडी सम्पूर्ण रुपमा व्यवहार व्यापार-व्यवसायमा संलग्न भए । दस वर्षपहिले बाट सुरु गरेको हाम्रो व्यवसाय अहिले पनि चलिरहेको छ यहि १० वर्ष्भित्र हामी दम्पतीले आर्थिक समृद्धीसँगै संतुष्टि समेत प्राप्त गरेका छौ ।
कुनचाहिँ वस्तुको व्यावसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ ? कती लगानीबाट व्यवसाय सुरु गर्नुभएको थियो र अहिले त्यस लगानिमा कति बृद्धी भयो ?
खासगरी हाम्रो व्यवसाय पाठशाला वा किचनमा प्रयोग हुने सामानको व्यवसाय हो हामीले पाँच लाखको लगानीबाट सुरु गरेको बेला अहिले पाँच करोड हाराहारी पुगेको छ र अहिले ग्यासको रेगुलेटर निर्माण गर्ने एउटा उद्योगसम्म स्थापना गर्न सक्षम भएका छौं।
प्राध्यापन जस्तो पेशा छोडेर व्यवसायतर्फ उन्मुख हुनुको कारण के हो ?
मैले अघि पनि भने बिहानै कलेज पढाउथे दिउँसो व्यवसाय गर्दथे र मलाई पछि आफै मालिक र आफै नोकर बन्ने चाहिँ राम्रो लाग्यो त्यसैले मैले प्राध्यापन पेशा पेशा छोडेको ह’ ।
उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीको महिला सदस्यमा उठ्नुभएको छ जित्ने माहोल कस्तो छ ?
चुनावमा देखिएका दुईवटै पक्ष इटहरीको गहना हुन् भद्रभलादमी पनि दुवै पक्षमा छन् दुवै पक्षमा उमेद्वारहरु दरिला छन् सफल व्यवसायी छन् र मैले पनि उहाँहरूसँग टक्कर लिएर अगाडी बढिरहेको छु मेरा विपक्षीका उम्मेद्वारहरु पनि असल हुनुहुन्छ असल भित्र बाट पनि उत्कृष्ट छान्ने समय आएको छ र आफु उत्कृष्ट छु जस्तो मलाई लाग्दछ . पछिल्लोपटक पनि म कार्य समितिमा बसेर महिलाहरूको निम्ति धेरै कार्यहरु गरेको छु महिला उद्यमिहरुको प्रत्यक्ष पहुँचमा रहेर महिला उद्यमीहरु पनि उद्योग वाणिज्य संघमा आउने वातावरण तयार गरेको छु तसर्थ मैले जित्छु भन्ने मलाई लाग्दछ।
जितेपछि के कस्ता कार्यहरु गर्ने एजेण्डा रहेको छ ?
हाम्रो पक्षको घोषणापत्र तयार हुँदै छ मूख्य एजेण्डाहरु हामी त्यही घोषणापत्रमा समावेश गर्ने छौं महिला ब्यवसायीहरुलाई मैले विशेष फोकस गर्ने छु । मेरो पक्षको एजेण्डा नै मेरो एजेण्डा हो तर म महिला उम्मेदवार भएको हिसाबले मेरो काम महिलाहरुका निम्ती हुनेछ । महिला उद्यमीहरुलाई अगाडि बढाउन म सधैंभरि अग्रसर हुनेछु , पहिलोपटकको कार्यकालमा गर्न नसकेका कार्यहरू म यस पटकको कार्यकालमा सम्पन्न गर्न जीउ ज्यान दिएर लाग्ने छु । सीप सिकेर कार्य गर्न चाहने महिला उदयमीहरूको लागि तालिम सञ्चालन गर्ने छु, सीप सिकेर त्यसै रहेका उद्यमीहरूको उत्पादन बढाउन स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी बजारीकरणको निमित्त सहयोग गर्नेछु व्यापार(व्यवसायको हिसाब तथा नेतृत्व विकासको तालिम समेत विभिन्न संस्थाहरूको सहयोगमा महिला उद्यमीहरुलाई प्रदान गर्नेछ’।
तपाईले पहिलो कार्यकालमा जितेर जाँदा के के गर्नु भएको थियो??
अघिल्लो चुनावमा दुई जना मात्र महिला ले जितेपनी २५ जनाको टिम निर्माण गर्यो उ.वा.सघं अन्तरगतको महिला उद्यमी टिम बनायौँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको केन्द्रबाट रकम ल्याई हामीले यहाँका स्थानीय महिलाहरुलाई विभिन्न समय समयमा विभिन्न किसिमका तालिमहरु प्रदान गर्यो , महिलाहरुलाई सक्रिय तुल्याई विभिन्न सामाजिक कार्यहरु समेत गर्यौ ।
तपाई व्यवसाय र समाजसेवामा संलग्न हुनुहुन्छ समयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
भनिन्छ जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय मेरो दरिलो पक्ष भनेकै राम्रोसँग समय व्यवस्थापन हो । म विभिन्न संघसंस्थामा रहेर सामाजिक कार्यमा पनि अग्रसर छु ।व्यापार-व्यवसाय,घरपरिवार, सबैतिर मैले हेरेको छु यी बाहेक उद्योग वाणिज्य संघमा रहेर कार्य पनि गरिरहेको छु यी सबै कार्यहरु मेरो राम्रो सग समय व्यवस्थापन गर्न सकेको कारणले सम्भव भएको हो।